Cannelloni gratin na tofu na ero | Bezzia
Maria onyekwere | 04/05/2021 10:00 | Emelitere ka 29/04/2021 20:17 | achịcha dị iche iche
Taa na Bezzia anyị na-emezigharị usoro ọdịnala cannelloni ọdịnala na a nri vegan. Ihe si na ya pụta bụ tofu na ero gratin cannelloni nke eserese anaghị eme ikpe ziri ezi. Crispy cannelloni na mpụta na nnọọ tọrọ ụtọ ndochi.
Yabasị, ose mgbịrịgba, karọt, ero na tofu, ndị ahụ bụ ihe ndị mejupụtara. A ndochi na i nwekwara ike jikere na akwukwo nri ndi ozo dị ka tempeh, soya bekee ma ọ bụ peas ederede iji nye ihe atụ ole na ole, ka ọ ghara ịbịara gị.
Na imepụta efere dị iche iche kwa ụbọchị ị nwekwara ike igwu egwu na ihendori. Gratin ha na obere vegan cheese bụ ihe niile ịchọrọ iji jee nri dị ukwuu, mana ọ bụrụ na ị gbakwunye ihendori emere na oyibo dị ka nke a ma ọ bụ vegan béchamel ... nsonaazụ ga-abụ iri. Na-anwa anwa ịkwadebe ha?
1 Efrata maka 12-14 cannelloni
Efrata maka 12-14 cannelloni
2 tablespoons mmanụ oliv
1 obere yabasị, minced
2 karọt, belata
1/2 akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbịrịgba, gbanwere
1/2 ose mgbịrịgba uhie, gbue
10 mushrooms, gbanwere
200 g. tofu, belata
4 tablespoons nke tomato puree
1 teaspoon tomato mado
1/2 ngaji nke paprika (ụtọ na / ma ọ bụ oseose)
Efere 14 nke cannelloni
3 iko mmiri oyibo
Nnu na ose nụrụ ụtọ
80 g. grated vegan cheese nke na-agbaze nke ọma
Na frying pan na tablespoons abụọ nke mmanụ sauté yabasị, ose na karọt maka nkeji 8.
Mgbe ah tinye ero na tofu ma esi nri nkeji ole na ole ruo mgbe ero were agba.
Tinye tomato, gwakọta ma sie ọzọ nkeji ole na ole ka mmiri ya ghara ịla n'iyi.
Iji mechaa ndochi, nnu na ose nụrụ ụtọ, gbakwunye paprika na mix.
Ugbu a esi nri efere ndị cannelloni n'ime ite mmiri nwere ọtụtụ nnu nnu na-eso ntuziaka nke ndị nrụpụta.
Ozugbo esi ya ma kpochaa ya, edebe a tablespoon nke ndochi na nke ọ bụla n'ime ha, tụgharịa ma gaa tinye cannelloni na otu ma ọ bụ karịa efere-nchekwa nchekwa.
Mgbe ị gwụchara, dozie ihendori kpo oku mmiri oyibo na nutmeg, nnu, ose na okara nke cheese na ite, rue mgbe agwakota ya.
Wunye na ọkara ihendori n'elu kannelloni, gbasaa chiiz fọdụrụ ma wụsa ihendori fọdụrụ na ya. Ihendori ekwesighi ikpuchi cannelloni, mana o gha iru ihe ruru 2/3 nke ha.
Were na preheated oven na gratin maka minit 10-15 ma ọ bụ ruo mgbe ọlaedo.
Na-eje ozi na-ekpo ọkụ tofu na ero gratin cannelloni.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » achịcha dị iche iche » Tofu na ero gratin cannelloni